အရောင်း ဦး စားပေးအသုံးချခြင်းသင်၏ပြင်ပအရောင်းအပြောင်းအလဲများကိုနှစ်ဆဖြစ်စေသည် Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, ဒီဇင်ဘာလ 14, 2014 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါဒီတစ်ပတ်မှာပဲကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာရောင်းဝယ်မှုစွမ်းရည်ကိုငှားရမ်းဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့ SaaS စီအီးအိုနဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာပဲဆွေးနွေးနေတယ်။ ၄ င်းတို့သည်အဝင်ဘောများကိုဂိုးသွင်းပြီး ဦး စားပေးနေစဉ်တွင်အဖွဲ့သည် ဦး ဆောင်သူများကိုဆက်သွယ်ရန်နှေးကွေးသည်။ တစ်နေ့လျှင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပေါင်း ၇၀ ကျော်ပြုလုပ်ရန်အထူးအရောင်းသမားတစ် ဦး လိုအပ်သည်။ သို့သော်အောင်မြင်မှုကြီးထွားမှုကိုထောက်ပံ့ရန်ရောင်းအားလုံလောက်စွာမောင်းနှင်ရန်မျှော်လင့်ပါကလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်လိုအပ်သည်။
ရလဒ်မကောင်းသောရောင်းအားအဖွဲ့များနှင့်ပတ်သက်သောပြofနာအချို့မှာ ၄ င်းတို့၏ ဦး စားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဦး စားပေးသတ်မှတ်ချက်မပါ ၀ င်ခြင်း၊ ၄ င်းတို့၏အဖွဲ့သည်လုပ်ငန်းများကို ဦး စားပေးလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်ခေါ်ဆိုမှုနည်း, အလားအလာနှင့်အတူ touchpoints ကနည်းနှင့်နောက်ဆုံးမှာ - ရောင်းအားလျော့နည်း။ Velocify သည် ဦး စားပေးအသုံးချခြင်းကိုအသုံးချနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် နေ့စဉ်စကားပြောချိန်ကို ၈၈% နှင့်နှစ်ကြိမ်အပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်!
ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးမြှင့်နိုင်စွမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များပိုမိုမြန်ဆန်စွာပိတ်ပစ်ရန်မဟုတ်ပါ အရောင်းအဝယ် ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများသည်မကြာခဏထိတွေ့နိုင်သောအချက်များနှင့်ပိုမိုကြာရှည်သောရောင်းအားသံသရာလိုအပ်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ အကယ်၍ သင်၏အရောင်းအဖွဲ့အားလုံးလုပ်နေကြသည်များကိုပိတ်ပစ်လိုက်သည်ဆိုပါကသင်၏ကုမ္ပဏီသည်မည်သည့်အခါကမှစာရင်းပြုစုမည်မဟုတ်သည့်ပိုမိုကြီးမားသောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရသည်။ ဆက်သွယ်မှုပိတ်ခြင်းအတွက်ခဲအမှတ်၊ ခေါ်ဆိုမှုအကြိမ်ရေနှင့်တုန့်ပြန်မှုအချိန်တို့သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ကိန်းဂဏန်းများမှာနှာချေရန်အချည်းနှီးဖြစ်၏။ အလိုအလျောက် ဦး စားပေးသတ်မှတ်ခြင်းသည်ကုမ္ပဏီများမှသူတို့၏ ၀ င်ငွေများသိသိသာသာတိုးပွားလာစေရန်ထပ်ခါထပ်ခါသက်သေပြနေသည်။ ဤတွင် Velocify ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကြည့်ပြီးဘောလုံးအချို့ကိုလေထဲထည့်ရန်အားပေးသင့်သည်။ အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံကိုရယူနိုင်ပါတယ်။ ဦး စားပေး၏ပါဝါ.
Tags: ခဲသွင်းခြင်းMulti- taskingဦး စားပေးရောင်းအား ဦး ဆောင်အမှတ်ပေးmultitasking အရောင်းအရောင်း ဦး စားပေးဂိုးသွင်းတယ်အလျင်